Monday 20 Baishak, 2073 | Menu	राजनीतिअर्थसमाजकलाखेलविश्वप्रवासप्रविधिस्वास्थ्यविचारअन्तर्वार्ताब्लगहोमपेज	शुक्रबार	राजनीतिअर्थसमाजकलाखेलविश्वप्रवासप्रविधिस्वास्थ्यविचारअन्तर्वार्ताब्लगहोमपेज
होमपेज / शुक्रबार / जहाँ सुनिन्छन् मायाका सुस्केरा
जहाँ सुनिन्छन् मायाका सुस्केरा	23 May 2013 बिहीबार ९ जेष्ठ, २०७०
प्रेमी–प्रेमिकाको मन उसै पनि अशान्त हुन्छ। मनको माया शरीरसँग टाँसिन खोजिहाल्छ। यस्तो बेला उनीहरू भीडभाडबाट टाढा तर शहरबाट नजिक कतै हराउन चाहन्छन्। केही समयअघिसम्म तन्नेरीहरूका लागि यस्तो गन्तव्यको अभाव थियो। शहर अचाक्ली बाक्लिन थालेपछि उपत्यकाको चारैतिर लोकल रिसोर्ट र खाजाघरहरू खुल्न थालेका छन्। यसपटक ती रिसोर्ट र खाजाघरमा सुनिएका मायाका सुस्केरा टिपेर ल्याएका छन् शिशिर वैद्यले। .....काठमाडौँको छेउछाउतिर एकदुई रोपनी जग्गामा स–साना छाप्रा या कुटी बनाएर चलेका रिसोर्टहरू असंख्य छन्। शहरका भव्य रेस्टुरेन्टहरू पनि मापसे कारबाहीपछि सुकिरहेका बेला यी रिसोर्टहरू कसरी चलेका होलान् भनेर कसैले प्रश्न गरे जवाफमा भन्न सकिन्छ, 'ती चलेका मात्र होइनन्, चम्केका छन्।' शहरभन्दा पर रहेका ठाउँका सडकका छेउछाउ र जंगलका आसपासमा खुलेका रेस्टुरेन्ट र रिसोर्टहरू तनको गर्मी मेटाउन चाहनेका लागि गतिलो र उपयुक्त 'रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर' भएका छन्। बालाजु बाइपासबाट ओशो तपोवनतिर लाग्दा सडककिनारामा देखिने थुप्रै रेस्टुरेन्ट तथा रिसोर्ट राजधानीवासीका मन र तन शान्त पार्न तल्लीन छन्। त्यहाँमात्र होइन, राजधानीबाट बाहिरिने विभिन्न नाकामा यस्ता छाप्रे रिसोर्टले राम्रै दानापानी जुटाइरहेका छन्। राजधानीबाट बाहिरिने विभिन्न नाकामा खुलेका रिसोर्ट तथा रेस्टुरेन्टका संरचना गजबका हुन्छन्। रेस्टुरेन्ट भए पनि दुईचार वटा कोठा हुनैपर्छ। रिसोर्ट भनेपछि त झन् कोठा नहुने कुरै भएन। सडककिनारका पाखाभित्तामा बनाइएका यस्ता रेस्टुरेन्ट विनाकोठा चल्न सक्ने अवस्था छैन। किनभने यहाँ आउनेहरूको पहिलो प्रश्न हुन्छ, 'कोठा त छ नि?' त्यहाँका रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरू पनि यसलाई सहज रूपमा लिन्छन्, 'यहाँसम्म आउने भनेको रमाइलो गर्नका लागि नै हो। हाम्रो टार्गेट पनि जोडीहरू नै हुन्।' रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरू आफ्नो व्यवसायको बचाउ गर्छन्, 'जोडी आउँछन् र रमाइलो गरेर फर्कन्छन् भन्ने त्यसमा केको आपत्ति ?' ग्राहक र व्यवसायीको सहज सौदा हुन्छ। 'एक घण्टाको कोठाभाडा कति? साधन राखेको होला नि?' रेस्टुरेन्ट सञ्चालकले ग्राहकको 'जरुरत' हेरी कोठाको रेट असुल्छन्। मिठोमसिनो खुवाउँछन्। तीन सय ५० देखि आठ सयसम्मका कोठा उपलब्ध गराउँछन्। यी रिसोर्टहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै कोठाको चार्ज हो। उनीहरूको भाषामा गेस्टको भीड लागेको बेलामा एउटै कोठाबाट पनि राम्रो आम्दानी हुन्छ। कोठा लिएपछि दिनभरि बसे पनि पाइन्छ र पाँचै मिनेटमा काम फत्ते गरेर निस्के पनि हुन्छ। यहाँ आउने ग्राहकहरू दिनभर बस्ने कमै हुन्छन्। एकाध घण्टाका लागि बुक हुने रेस्टुरेन्टका कोठा दिनमा तीनचार पटकसम्म बुक हुने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। बालाजु बाइपासदेखि मुड्खु भञ्ज्याङसम्म दर्जनभन्दा बढी रेस्टुरेन्ट छन्। भन्ज्याङ कटेपछि पाखो बारीमा जंगलको बीचमा थुप्रै रिसोर्ट देखिन्छन्। मधुवन, वृन्दावन, रानीवन नाममा खुलेका रेस्टुरेन्टले कोठासहितको सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। विनाजोडी पुग्नेका लागि जोडीसमेत मिलाइदिने रेस्टुरेन्ट प्रहरीबाट सुरक्षित रहेको दाबी गर्छन्। मुड्खु भञ्ज्याङ कटेर जानेहरूका लागि भने प्रहरीले अलि बढी नै सोधपुछ गर्ने भएकाले रेस्टुरेन्टसम्म केटी बोलाउन गाह्रो हुने रेस्टुरेन्टका कर्मचारी बताउँछन्। लभ्ली रेस्टुरेन्टका कर्मचारी पुष्कर गौतमले जोडी मिलाउन नसकिने तर जोडी लिएर आउनेका लागि भने कोठा उपलब्ध गराउने गरिएको जानकारी दिए। तर, प्रहरी प्रशासनले बेलाबेलामा गैरकानुनी यौनधन्दा गराएको भन्दै यस्ता रेस्टुरेन्टहरूमा छापा हान्ने गरेको छ। जोडीहरू पक्राउ पर्ने गरेका छन्। शहरभन्दा सुरक्षित स्थान भनेर जानेहरू कहिलेकाहीँ प्रहरीको फन्दामा पर्ने गरेका छन्। 'हिजोआज सेटिङ मिलाएका कारण त्यति अप्ठेरो छैन,' एक रेस्टुरेन्ट व्यवसायीले भने। राजधानी अहिले साँघुरो भएको छ। ठूला होटलदेखि मध्यमस्तरका सयौँ रेस्टुरेन्ट ग्राहकको सेवामा हाजिर भए पनि यहाँको भीडभाडदेखि केही घण्टा भए पनि सबै भाग्न चाहन्छन्। 'आपत्तिजनक गतिविधि' भन्दै मन्दिर, पार्कलगायत क्षेत्रमा डेटिङ गरिरहेका युवायुवती पनि प्रहरी फन्दामा पर्न थालेपछि उनीहरू डेटिङसँगै 'सेटिङ' गर्न पाइने ठाउँतिर लागेका छन्। उपत्यकाबाट १५ मिनेटदेखि एक घण्टासम्मको दूरीमा रहेका यस्ता रेस्टुरेन्टले ग्राहकको गोप्यता पनि कायम गरिदिएका छन्। शहरबाट अलिकति बाहिर गएर रमाइलो गर्न चाहने जोडीहरूलाई लक्ष्य गरेर उपत्यकाको विभिन्न नाकामा अहिले दर्जनौँ रिसोर्ट र रेस्टुरेन्ट खुलेका छन्। छोटो र मिठो रोमान्स चाहने जोडीहरूका यी गन्तव्य वरदान सावित भएका छन्। रानीवनको रिसोर्टमा पुगेका एक रोमान्टिक पुरुषले भने, 'मन मिलेर तनको राप शान्त पार्न खोज्नेहरू यस्तै ठाउँ खोजिरहेका हुन्छन्। यहाँका रेस्टुरेन्ट र रिसोर्ट सेफ पनि छन्।' जोडी विशेषका लागि खुलेका यी स्थान यौनप्यास मेट्नेहरूका भरपर्दा थलो भएका छन्। 'खुलमखुला रेडलाइट एरिया नै सञ्चालनमा आएको छ भन्न खोजिएको चाहिँ होइन। यहाँ रमाइलोसँग समय काट्न आउनुहोस् तर चाहिने व्यवस्था आफैँ गर्नुस्,' एक रेस्टुरेन्ट सञ्चालकले विज्ञापन गर्ने शैलीमा भने। तर, यस्ता गन्तव्यमा पुग्नका लागि कुनै झन्झट बेहार्नै नपर्ने भने होइन। बालाजुदेखि लगभग छ किमी उत्तर, मुड्खु चेकपोस्ट पुग्दा विशेषगरी युवा जोडीमाथि प्रश्नहरू तेर्सिने गर्छन्, 'कहाँसम्म जाने? घर कता? लाइसेन्स छ?' चेकपोस्टका प्रहरी युवायुवतीको जोडी देख्नेबित्तिकै विशेष सतर्कतासाथ चेकिङ गर्न थाल्छन्। रिपोर्टिङका क्रममा मुड्खुको एक रिसोर्टमा एक जना भलाद्मी भेटिएका थिए। गाडीमा आएका उनले भने, 'कहिलेकाहीँ रिफ्रेस हुन यता आइन्छ।' अफिस सकिएपछि आएका उनी चुरोट सकाएपछि 'मेरो त मान्छे आयो क्यारे' भन्दै रिसोर्टको कोठातिर लागेका थिए। उक्त रिसोर्ट व्यवसायीका अनुसार ती भलाद्मी सरकारी कर्मचारी हुन्। उनी हप्ताको एकदिन पार्टनरसहित आउने गरेका छन्। नागार्जुन डाँडाले ओसिलो पारेको यो क्षेत्र शान्त छ। वातावरण शीतल छ। पारिवारिक रिसोर्ट, रेस्ट क्याम्प जे लेखिए पनि यहाँका रेस्टुरेन्ट र रिसोर्टको करिडोर 'नाम एक, काम अनेक' का लागि प्रसिद्ध छन्। दर्जनौँ यस्ता रिसोर्ट र रेस्टुरेन्टका ग्राहक युवा जोडी नै हुने गरेका छन्। 'जोडीहरू आउँछन्,' लभ्ली रेस्ट क्याम्पका कर्मचारीले भने, 'कोही घण्टौँ बस्छन्, कोही एक घण्टामै हिँड्छन्। खाना अर्डर गर्नुपरे फोनबाटै अर्डर गर्छन्। अब बन्द कोठामा के–के गर्छन्, हामीलाई के मतलब?' शनिवार प्याक हुने यी स्थानमा अन्य दिन पनि केही रुमहरू व्यस्त नै रहन्छन्। कहिलेकाहीँ रुमका लागि जोडीले घण्टौँ पनि कुर्नुपर्ने हुन्छ।तीनदेखि आठ सय रुपैयाँसम्म तिरेपछि दिनभरिका लागि रुम आफ्नो! तर, दिनभरि बस्ने गेस्ट बिरलैमात्र आउने एक रिसोर्टका कर्मचारीले बताए। यी रिसोर्टका रुम कस्टमा एकरूपता पाइँदैन। कतै चार सय, कतै छ सय त कतै आठ सयसम्म पर्छ। गएगुज्रेका रुमदेखि अट्याच बाथरुमसहितका स्तरीय रुमहरूको सुविधा रहेका रिसोर्टहरू पाइन्छन्। हरेक रुममा एक डबल बेड, दुई थान सिरानी, एक थान सिरक अनिवार्य उपलब्ध हुने गर्छन्। रिसोर्ट भनिए पनि यहाँका कोठाहरूको अवस्था र गन्धले कस्ता रिसोर्ट हुन् भन्ने त्यसै ठम्याउन सकिन्छ। धुलिखेल, नगरकोटका उच्च स्तरीय रिसोर्टमा आउजाउ गर्नेका लागि यी रिसोर्ट बिलकुल स्तरहीन र थर्डक्लासका लाग्नु स्वाभाविकै हो। तर, काठमाडौँबाट मात्र आठनौ किलोमिटरको दूरीमा शान्त, शीतल र सस्तो ठाउँको आनन्द पाएपछि चञ्चल तनमनलाई शान्त पार्न अरू के चाहियो? काठमाडौँको परिधिमा यस्ता घण्टे रिसोर्टहरू फैलिएका छन्। भक्तपुरको सूर्यविनायक चोक नाघेपछि साँगा चोकसम्म दायाँबायाँ देखिने स–साना खाजा घर तथा कटेज रेस्टुरेन्टमा पनि यस्ता घण्टे रुमको सुविधा प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै ललितपुरको भैँसेपाटी, सिकालीमा रहेका रेस्टुरेन्टहरूमा पनि रुम सुविधा छ। काठमाडौँको टौदह, फर्पिङ आदि ठाउँमा पनि यस्ता रिसोर्ट प्रशस्त छन्।प्रशासनले यी ठाउँहरू र यहाँ हुने क्रियाकलापलाई गैरकानुनी भन्छ। त्यसैले बेला–बेला चेकिङ र कारबाहीका समाचारहरू सुन्ने गरिन्छ। तर, पनि युवाहरू यस्ता स्थानप्रति आकर्षित हुने गरेका छन्। रिसोर्ट व्यवसायीहरूको साझा मत छ– 'व्यावसायिक रूपमा केटीहरूलाई परिचालित गरी चलाएको भए पो गैरकानुनी भन्न मिल्छ। जोडीहरू आउँछन्, एक, डेढ घण्टा बस्छन्, रमाइलो गर्छन्, आफ्नो बाटो लाग्छन्। यसलाई किन गैरकानुनी भन्ने?' ००० सूर्यविनायक क्षेत्र कटेपछि राजधानी भित्रिने नाकाका विभिन्न ठाउँमा खुलेका कटेज पनि इन्ज्वय गर्ने क्षेत्रको रूपमा परिचित हुँदै छन्। प्रेमिका हुन् अथवा केही घण्टाका लागि ल्याइएका युवती, तिनीहरूलाई घुमाउने र रासलीलामा रमाउने ठाउँका रूपमा विकसित हुन थालेका छन्, यस्ता कटेज। सूर्यविनायकदेखि साँगासम्म जोडीका लागि लक्ष्य गरेर खोलिएका थुप्रै कटेज भेटिन्छन्। राजमार्गसँग जोडिएका तर प्रशासनको पहुँच कम हुने गरेका कारण जोडीहरूको गन्तव्यको नयाँ आश्रयस्थलका रूपमा यी कटेज प्रख्यात हुन थालेका छन्। कटेजका प्रमुख ग्राहकका रुपमा राजधानीबाट घुम्ने बहानामा त्यहाँ पुग्ने जोडी नै हुन्। 'जोडी आउँछन्, कटेजमा बस्छन्। गोप्य कटेजमा बस्नेहरूले के गर्छन्, चिहाउने कुरा भएन,' साँगास्थित एक कटेजका कर्मचारीले भने। उनका अनुसार उनी कार्यरत कटेजमा मात्र दैनिक १२ देखि १८ जोडीसम्म आउने गरेका छन्। शनिवार र बिदाको दिन जोडी ज्यादा आउने गरेको उनले बताए। राजधानीमा बेरोजगारहरू बढेका छन्। राम्रो लाउने, मिठो खाने रहरले युवतीहरूलाई यौनव्यवसायतिर डोहोर्‍याउन थालेको छ। समयसँगै फेरिँदै गएको यौन व्यवसाय क्याबिन, गजल रेस्टुरेन्ट, डान्स, मसाज हुँदै अहिले ओपन होटलको रूपमा मौलाइरहेको प्रहरीले पनि स्वीकार गरेको छ। नाका क्षेत्रमा पनि यस्ता महिलाहरूको सम्पर्क बढ्न थालेको छिटपुट जानकारी आउन थालेको महानगरीय प्रहरी वृत्तले जनाएको छ। केही वर्षअघि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको एक अध्ययनअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा १२ वर्षदेखि ३० वर्षसम्मका करिब ४० हजार महिला क्याबिन रेस्टुरेन्ट, मसाज पार्लर र डान्स रेस्टुरेन्टमा कार्यरत थिए। अहिले त्यो संख्यामा वृद्धि भएको हुनुपर्छ। राजधानीमा यौन व्यावसायमा कडाइ गरेपछि उनीहरू राजधानी छिर्ने नाकातिर बढेका हुन्।केही वर्षअघिसम्म शहरभित्र जतासुकै क्याबिन रेस्टुरेन्टका बोर्ड झुन्डिएका देखिन्थे। तर, अहिले शहरभित्र क्याबिन रेस्टुरेन्टको संख्या घटेको छ। यस्ता रेस्टुरेन्ट रिङरोड र आसपासका क्षेत्रमा सरेका छन्। शहरमा प्रहरीले बढी दुःख दिने र घर भाडा पनि महँगो हुने गरेका कारण क्याबिन रेस्टुरेन्टहरू शहरबाहिर खुल्न थालेका छन्। तर, शहरबाहिर खुलेका अधिकांश रेस्टुरेन्टले आफूलाई रिसोर्टको रूपमा रूपान्तरण गरेका छन्। स–साना कोठा बनाएर ग्राहकलाई तनको भोक मार्ने सुविधा प्रदान गरिरहेका छन्। (डी विनोदको सहयोगमा) Tweet Leaveacomment Message *
सेक्सले आत्मीयता बढाउँदैन : सुरबिना कार्की, अभिनेत्रीसेक्स के हो?
प्रकृतिको नियम, जसलाई सबैले पालन गर्नुपर्छ।
सेक्सले प्रेमी–प्रेमिकाबीच आत्मीयता बढाउँछ भन्छन् नि?
म यसमा सहमत छैन। सेक्सले आत्मीयता बढाउँदैन। आत्मीयता भनेको त भावनात्मक कुरा हो, शारीरिक होइन।
तपाईंलाई सेक्सी देखिन मन...	चर्चतिर दुःखीहरूक्रिस्चियन धर्म प्रचारकहरू घरदैलोमै पुगेर तथा सार्वजनिक स्थल, अस्पताल, सुकुम्बासी बस्ती, आदिवासी जनजाति, दलित र पिछडिएको बस्तीमा छिरेर इसाई धर्म फैलाउन पर्चा बाँड्छन्। स्थानीयलाई विभिन्न लोभ देखाउँछन्। यस्तै लोभमा परेका...	कीर्तिमान सुधार्ने लक्ष्यकीर्तिमानी धावक यामसाजन सुनार र दिलमाया कार्की चोटमुक्त हँुदै पूर्ण प्रशिक्षणमा फर्किएका छन्। अहिले दुवै जना एसियाली खेलकुदको बन्द प्रशिक्षणमा छन्। एक सय मिटरका कीर्तिमानी धावक यामसाजन जेठमा एसियाली खेलकुदको...	ल्हारक्यालको लकरमाननीय सभासद् ल्हारक्याल लामाको लकरमा गोली भेटिएपछि कमरेड तरंगित भए । उनलाई असाध्यै रिस पनि उठ्यो । कमरेडको रिस माननीय सभासद्प्रति भन्दा पनि अध्यक्ष कमरेडप्रति तीव्र थियो । उतिबेला ल्हारक्याल...	कसरी यति सुन्दर?सुन्दर देखिने चाहना सबैमा हुन्छ। हरेक महिला सुन्दर हुन चाहन्छे। त्यसमा पनि ग्ल्यामर क्षेत्रका महिलाका लागि त शारीरिक सुन्दरता उनीहरूको पुँजी नै हो। त्यसैले उनीहरूले सिँगारपटारमा अलिक बढी नै ध्यान...	कोइरालाको नियतमै खोटनेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बोलेको बुझिँदैन। जिब्रोमा लागेको क्यान्सरका कारण उनी प्रस्ट बोल्न सक्दैनन्। वयोवृद्ध प्रधानमन्त्री कोइरालामा उमेरका कारण सिर्जना हुने समस्या पनि छन्। तर, देशको कार्यकारी...	'संकल्प'को तयारीमा एपीधरानका गायक एपी शेर्पा चौथो एकल एल्बम संकल्पको तयारीमा जुटेका छन्। एल्बमको 'गरौँ संकल्प, गरौँ अठोट, गरौँ प्रण पनि' बोलको राष्ट्रिय भावको गीत भने एल्बम बजारमा आउनुअघि नै चर्चामा छ।	प्याब्सनको मनपरीएसएलसी टेस्ट परीक्षा लिन सरकारले बन्देज गरे पनि निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) ले अभ्यास परीक्षाका नाममा टेस्ट परीक्षा लिँदैछ। शुक्रबार	भुइँचालो र शासकीय बहानाअघिल्लो वर्षको वैशाख १२ गते एउटा ऐतिहासिक त्रासदीको दिन थियो। जुन दिन नेपाल सम्पूर्ण रूपमा आतंकित...	टोलमा भूकम्प किस्साजब टोलका सारा मानिसहरू बेपत्ता दौडँदै खाली चउरतिर आए, तीमध्ये धेरै रुँदै थिए। तिनीहरू सबै आत्तिएका...	राजनीतिक इमान र लोकतन्त्रको मर्यादावैशाख ११ नजिकिँदै जाँदा नागरिकमा बेग्लै प्रकारको उत्साहको सञ्चार हुन्छ। लोकतन्त्रमा निहित सौन्दर्यका कारण जनतामा उत्साह...	पत्थरको तमासायस्तो लाग्छ– देशमा भाग्य र अन्धविश्वासको सुपरमार्केट नै चलिरहेको छ। आफ्नो भविष्यप्रति चिन्तित मान्छेहरूलाई चिकित्सकले औषधि...	भर्खरै...
बैंकले बढाए नाफा
छुटाउनु भयो कि	पानीमा दोब्बर असुलीकाठमाडौं-बढ्दो खडेरीसँगै पानी अभाव चुलिँदा ट्यांकर व्यवसायी 'उपभोक्ता लुटेर कमाउने' मौका छोप्न थालेका छन्। धारा र...	हराएको १२ लाख फिर्ता पाउँदा...धरान- कोसी राजमार्गअन्तर्गत धरान इटहरी सडक खण्डमा बिहीबार राती दुर्घटना हुँदा धरान १७ का ओमबहादुर गेलालको...	कहाँ हरायो ३० अर्ब?काठमाडौं– भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ), गैरसरकारी संस्था (एनजिओ), निजी संस्था तथा प्रतिष्ठान, रेडक्रस/रेड क्रिसेन्टलगायत...	किन सर्छ उत्तरी ध्रुव ?काठमाडौं- 'तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ– पृथ्वीको तौल कति छ?'यसलाई किलोग्राममा मापन गर्ने हो भने शून्य गणनामा एक,...	निजीको छात्रवृत्तिमा नेताका फोनकाठमाडौं-'हेलो सर, म नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य बोलेको, मेरा आफन्तको छोराका लागि पूर्ण निःशुल्क छात्रवृत्ति सिफारिस...	Nagarik News